मरिच सेवन गर्नुको यति धेरै फाइदा
यौन/स्वास्थ्य - चैत्र ५, २०७५, मंगलबार, काठमाडौं
मरिचालाई मानिसहरुले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्छन । कोहिले चियामा, खिरमा त् कोहिले त्यतिकै पनि सेवन गर्ने गर्छन । तर कतिलाई थाहा नहुन सक्छ यसका फाइदा हरुका बारेमा । मरिचको सेवनले मानिसलाई पेटको दुखाइ कम गर्नुका साथै मरीचमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल गुणले पेटमा हुने इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । मोटो मानिसहहरुका लागि मरिच उत्तिकै फाइदाजनक रहेको छ, यसले मोटो मानिसहरुको मोटोपन घटाउन समेत मद्दत गर्छ । त्यस्तै, कब्जियत तथा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन पनि मरिचको सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
मरिचको सेवनले क्यानासरका बिरामीलाई समेत निकै फाइदा हुन्छ । मरिचमा क्यान्सरका सेल तथा कोशिका नष्ट गर्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गुण हुन्छ । आँखा कमजोर भएमा मरिच पिसेर धूलो बनाउनुस् अनि घिउसँग यसलाई मिसाएर नियमित सेवन गर्नुस् । यसो गर्दा आँखा तेजिलो हुन्छ । मरिचको अर्को फाइदा भनेको यदि मरिचको धुलोलाइ एक गिलास मोहीमा घोलेर खाएमा पेट भित्रको किराहरु मर्छन ।पाइल्सको समस्या छ भने मरिच उत्तम औषधी हो ।
के हो पायल्स ? यसबाट कसरी बँच्ने ?
के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ?
गर्मीमा आँखालाई धुलो र धुँवाबाट कसरी सुरक्षित राख्ने ?